www.camaloow.com - News: Uganda Oo Waji-gabax Kala Kulantay Magdhaw ay Qaramada Midoobay Kaga Dalbatay Diyaarado Kaga Burburay Somalia.........
June 19 2018 19:51:59
Uganda Oo Waji-gabax Kala Kulantay Magdhaw ay Qaramada Midoobay Kaga Dalbatay Diyaarado Kaga Burburay Somalia.........
<?php </a> Militeriga Dalka Uganda, ayaa waji-gabax kala kulmay dalab ay u gudbiyeen Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo la xidhiidhay magdhaw ay ka doonayeen Diyaarado dhawaan kaga burburay Gudaha Dalalka Somalia iyo Kenya.
Madax sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay, ayaa jimciyadda Taliska Uganda ee Somalia ku sugan ku wargeliyey inaanay jirin wax mag-dhaw ah oo ay ka Bixinayaan Diyaarado saddex ahaa oo sanado kahor ku Burburay Gudaha dalka Kenya, xilli ay ku socdeen dhinaca Muqdisho.
Taliyaha Guud ee Ciiddanka Difaaca Uganda, Jeneral Edward Katumba Wamala oo Shir Jaraa’id ku qabtay Xarunta Milliteriga Uganda ku leeyihiin Deegaanka Mbuya ee Kampala ayaa sheegay inuu QM rajo-beelkii ugu dambeeyey kala kulmay qaddiyadda ku saabsan inay magdhow ka bixiyaan saddexda Helikoptar ee ku burburay gudaha dalka Kenya.
“Kama arkin calaamad wanaagsan inay QM dib u bixinayaan khasaaraha naga soo gaadhay Diyaaradaha naga burburay, waxaan weli isku hawlaynaa inaan samayno wax kasta oo suurtogal ah si magdhow loo bixiyo” ayuu yidhi Jeneral Edward Katumba Wamala.
Waxa kaloo uu sheegay inaanay QM bixinin rajaddii ugu dambeysay oo ay ku xaqiijinayaan inay bixinayaan magdhowga Diyaaradaha Helikopters-ka ee Uganda ka burburay.
Jeneral Wamala, waxa kaloo uu xusay inay Ururka Midowga Afrika kala hadleen qaddiyadaasi, oo ay rajo kooban ka qabaan.
Dhinaca kale, Ururka ka shaqeeya Hubka caalamka loo kala gudbiyo”SIPRI” ayaa sheegay in saddexda Diyaaradood ee Milliteriga Uganda ka burburay inuu noocoodu ahaa MI 24 oo loo soo casriyeeyey modelka Diyaaradaha Helikoptaradda ee MI 24 PM, kuwaasi oo kharashkooda guud dhan yahay 10-million oo Dollar.
Saddexdaasi Diyaaradood waxay bishi August ee sannadki i2012-kii ku burbureen Buuraha Mount Kenya, waxaana ku geeriyootay 7-qof, halka kuwo kalena ku dhaawacmeen.
· xassan on September 29 2014 · 0 Comments · 63511 Reads ·
Xildhibaanada Hiiraan iyo Shirka H
casho sharaf Denmark
Dhacdooyinks Yaabka Leh
Daawo Yaabka Aduunka
Wafuuda Turkiga Baledweyn
Render time: 0.01 seconds 26,257,793 unique visits